Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo Yurub waxay had iyo jeer ina xasuusisaa Hollywood hore iyo boqornimadii. Sayidka, bir jabis mid ka mid ah magaalooyinka layaabka leh ee Yurub had iyo jeer waxay ku saabsan tahay waxyaabaha quruxda badan ee nolosha. Cuntada wanaagsan, dhaqanka, iyo taariikh leh qalqal qaas ah iyo qaab dhismeedka neefta naga qaada, waa…
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Yurub waxay leedahay dhaqan aad u hodan ah iyo taariikh, taas oo ka dhigtay meel caan ah oo fasax loogu tago safarrada waaweyn. Madxafyada, beeraha, astaamaha quruxda badan, iyo xulasho balaaran oo makhaayadaha ah. In gaaban, hadaad hawlgab tahay siyaabo badan oo cajiib ah oo aad naftaada ugu buuxin karto magaalo kasta…
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, ...
Waqtiga Akhriska: 9 daqiiqo Qalcaddii dhexe, canab ah, Bbc breathtaking, waa uun waxyaabo dhawr ah oo ka dhigaya Yurub kuwo kaamil ah fasaxa dayrta. Magaalo kasta oo Yurub ku taal waxay leedahay soo jiidasho, laakiin meelaha ay ku socdaan anaga 10 fasaxyada ugu wanaagsan ee liiska Yurub waa dhowr ka mid ah meelaha ugu quruxda badan. Europe…
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Luxembourg, Tareenka Safarka Switzerland, ...
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Safarka tareenku waa habka ugu badan ee loogu safro Yurub. Sidaa darteed, qaar ka mid ah saldhigyada tareenka ee ugu mashquulka badan adduunka waxay ku yaalliin Yurub iyo waqtiyada qaarkood, dunida oo dhan. In kasta oo ay dadku buuq badani ku jireen saacadihii ugu sarreeyay, dusha sare 5 busiest train stations in Europe are…
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tilmaamaha Tareenka Safarka, ...
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Ciao! Waad qorsheynta safarka ee Meyeydaan in Italy! Waa ku dhashay ee hormariyo iyo magaalo ballamo in elate oo aad loo Waxyoodo ahayn shuqullada aawadood ay of farshaxanka, naqshadaha, iyo jacaylkeeda cuntada. Italy is the true home…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Waxaan si adag u aaminsan safarka tareenka in uu yahay mid ka mid ah hababka ugu fiican oo ugu soo kobcaya, saaxiibtinimo oo ay safarka. Si taas loo gaaro, aannu isku duba iyada oo ku dhowaad laba dersin ka shaqeeya tareenka oo kala duwan si aad u soo qaado ugu wanaagsan oo ugu jaban tigidhada tareenka ee guud ahaan Yurub. This means we can…
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tilmaamaha Tareenka Safarka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe...
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Weligaa mala yaabtay waxa ay dareemeysaa in ay taagni dhexdiisa, ballaaran ku gashid, daaqadaha sawirka weyn sida lashiidey dunida by? Sidee ku saabsan la u nexeen oo ay u hurdo by ruxid ku joogta ee tareen sida hoos trundles track a? Safarka tareenka waa mid aad u caadi ah…
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Iswidhan, ...